Uncategorized – Page 60 – Shabakadda Amiirnuur
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa goor dhow baahisay bayaan ku qoran luqaadda Ingiriisiga, kaasoo ugu horreyn lagu faahfaahiyay sida uu u dhacay hawl galkii maanta. Bayaanka oo uu soo saaray Maktabka Warfaafinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka lagu billaabay qarax weyn ka dib-na ay xigeen ciidamo xoog […]
Farmaajo Iyo Beyle Kee Saxan?
Maxweynaha DF, Maxamad Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka maaliyadda C/raxmaan Bayle ayaa si is khilaafsan uga hadlay dhisme ku yaalla magaalada Washinton oo ay maalmo ka hor dowladdu iibsatay. Dhismahan oo ah mid aan sidaa u weeneyn marka loo eego safaaradaha caalamka ee halkaa ku yaalla, ayaa waxaa lagu iibiyay lacag […]
Askari Ka Tirsan Ciidanka Puntland oo Ku Dhintay Iska Hor Imaad Ka Dhacay Garowe. (Dhageyso)
Magaalada Garowe ee gobolka Nugaal waxaa ka dhacay iska hor imaad khasaare sababay oo dhex maray labo ciidan oo ka wada tirsan askarta maamulka Puntalnd. Iska hor imaadkan ayaa wuxuu ka dhashay kadib markii askar ka socota Madaxtooyada ay burburin ku billaabeen dhismayaal ku yaalla agagaarka Wasaaradda Hawlaha Guud, waxaana […]
Qaarka mid ah xubnihii soo doortay Baarlamaanka Federaalka ah ayaa mar kale lagu soo bandhigay Buullo fulaay oo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Bay iyo Bakool oo kamid ah dhulka ay maamusho Xarakada Al-Shabaab. Ergadaan oo ah Todobaatan iyo Lix ruux waxaa ku jira qaar ka mid ah dadkii […]
Amisom oo Gaari Looga Burburiyay Magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay weerar qarax ah oo ay fuliyeen Al-Shabaab, islamarkaana la beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada shisheeye ee Amisom. Qaraxa ayaa waxa uu si buuxda u haleelay gaari booyad ah oo ay Shidaal ku wateen shisheeyaha, wuxuuna sababay in gaarigaasi uu burburo. […]